Aamina Cilmi Fariid oo Sheegtay in ay Niyad-jabtay Doorashadii Somaliland ee ay Ka Qayb Gashay
Doorashadii golaha wakiillada ee 31-kii May ka dhacday Somaliland ayaa waxaa ka qayb galay dumar ay tiradoodu ahayd 18, kuwaasoo midna aanay ka soo bixin 82-kii kursi ee ay ku tartameen musharraxiintii xisbiyada.
Dumarka ayaa sheegay in natiijadaasi ay niyad jabisay guud ahaan haweenka Somaliland.
Dumarkii 18-ka ahaa ee u tartamay kuraasta waxaa ka mid ahayd Aamina Cilmi Fariid oo u tarmeysay kurisiga baarlamaanka Somaliland ee gobolka Awdal, waxayna ahayd markii ugu horreysay ee ay u tartanyo kursigan.
Barnaamika Haweenka iyo Qoyska ayay Aamina uga warrantay waxa ay la tahay in ay doorashada ku weyday, ololaha ay gashay, kharashka kaga baxay, iyo haddii ay mar kar kale u tartemsyo kursigaasi iyo in kale.
Dhageyso Wareysiga Amina Cilmi Fariid